ISundowns ngeke ikwazi ukuzithela ngabandayo | Scrolla Izindaba
ISundowns ngeke ikwazi ukuzithela ngabandayo
Umsizi womqeqeshi weMamelodi Sundowns, uRulani Mokwena, ukholwa ukuthi iqembu lakhe ngeke likwazi ukuzithela ngabandayo uma selibhekene nePolokwane City emzuliswaneni we-16 we-Nedbank Cup.
Yize bedlala neqembu elisezingeni eliphansi, uMokwena uwuthatha ngomunye wemidlalo yabo ebaluleke kakhulu futhi abakwazi ukuzithela ngabandayo.
“Cha, cha asibheki ukugculiseka. Akukho ezinhlelweni zethu futhi asinawo amathuba okuvumela ukungazethembi ukuthi kungene kithi,” kusho uMokwena etshela i-PSL Media.
“Ngeke sikwazi ukulahla ithemba. Lokho kusho ukuthi nenani okufanele silikhokhe nalo liphezulu kakhulu.”
“Kuningi esikufunayo, ukuthola amagoli amaningi kanye nezinhloso esizibekele zona,” kusho uMokwena.
UMokwena uthe, badlala neqembu elivuselelwe, ikakhulukazi ngaphansi komqeqeshi omusha uJohnny Ferreira. Banqobe kabili futhi badlala ngokulingana kwemibili emidlalweni yabo emine edlule
“Asikwazi ukugcizelela ngokweqile ubukhulu balo mdlalo futhi siyazi ukuthi kufanele sisebenze kanzima nangokweqile ukuthola amaphuzu ngoba banokuvikela okuhle.”
“Baye babagcina iningi labadlali babo ababenabo ngesikhathi se-premiership,” kwengeza uMokwena.
IDowns izokwamukela iPolokwane City emzuliswaneni wokugcina we-16 we-Nedbank Cup ngoLwesithathu e-Loftus Versfeld Stadium. Umdlalo uzoqala ngo-15: 00.
Ozonqoba lo mdlalo uzobhekana ne-Orlando Pirates kuma-quarterfinal e-Nedbank Cup mhla zi-15 kuMbasa ngenxa yezinguquko ezenzeka ezwenikazi. Umdlalo uzoqala ngo-18: 00.
I-Premier Soccer League (PSL) ngoLwesibili iqinisekisile izinsuku, izinkundla kanye nezikhathi zokuqalisa umdlalo wamanqamu e-Nedbank Cup yangowe-2021.
NgoMgqibelo, mhla zi-13 kuNdasa kowe-2021:
IChippa United izobhekana neRichards Bay, e-Sisa Dukashe Stadium, 15:30
NgeSonto, mhlaka zi-14 kuNdasa kowe-2021
ICape Town All Stars izobhekana nePretoria Callie’s, eDanny Craven Stadium, ngo-15: 00
IBlack Leopards izobhekana neTshakhuma Tsha Madzivhandila, e-Thohoyandou Stadium ngo-18:00.
NgoLwesine, mhla zi-15 kuMbasa kowe-2021
IMamelodi Sundowns noma iPolokwane City izobhekana ne-Orlando Pirates, ngo-18:00.